Ny tantaram-pitiavana amin'ny birao dia fifandraisana misy eo amin'ireo mpiasa izay mihoatra ny fandraharahana. Ny orinasa sasany dia manao jery todika an'io, any amin'ny fikambanana hafa dia voarara tanteraka izany, hatramin'ny ary fanilihana. Fa tsy afaka milamina ny fonao! Noho izany, raha nisy tantara toy izany nitranga, dia zava-dehibe ny fanarahana ny lalàna fiarovana mba hanafenana ny fifandraisana.
Tsy milalao fitia any am-piasana!
Ao amin'ny sehatr'asa dia ilaina ny miala tanteraka amin'izy samy izy, indrindra raha misy fakantsary fanaraha-maso napetraka ao an-toerana. Mazava ho azy fa tsy voarara ny mifampiresaka tsara nefa ilaina ny manilika tanteraka milalao fitia any am-piasana, fambara, fikasihana ary mariky ny fitiavana hafa na ny fahalianana mihombo.
Mihevitra ve ianao fa tsy hisy hahatsikaritra? Fa tsy izany! Ny fifandraisana toy izany dia vakian'ny hafa haingana. Ary, mazava ho azy, ny firaisana ara-nofo any am-piasana dia tsy ekena.
Manoratra aminao aho
Raha manana tantaram-pitiavana amin'ny birao ianao dia aza mampiasa mailaka orinasa handefasana hafatra mahafatifaty na filalaovana fitia.
Aza adino fa ny fanananao adiresy orinasa dia tsy fanananao, ary ny mpitantana ny rafitra na ny lehibenao dia afaka manamarina izany amin'ny fotoana rehetra. Alao sary an-tsaina ny hafaliana ho azy ireo hamaky ny taratasinao.
Ny fahanginana dia volamena!
Na ahoana na ahoana dia tsy tokony hizara fampahalalana momba ny tantaram-pitiavanao amin'ny birao amin'ny mpiara-miasa aminao ianao. Tsotra ny zava-drehetra eto! Na ho ela na ho haingana dia mbola hanao tatitra amin'ny lehibeny izy ireo na hanely tsaho.
Raha voarara tanteraka ny hazing dia mitovy amin'ny fandroahana izany. Tsy fahavalon'ny asanao manokana ianao ... Ary eny, tsy mila mamoaka sary iraisana amin'ny tambajotra sosialy ianao, manome marika ny mpiasa amin'ny sary, sns.
Aza manana tantaram-pitiavana amin'ireo olona mety handroaka anao. Ity dia tokony hosoratana ambany ambany ho toy ny instinct amin'ny fitehirizana ny tena. Tsy mila manazava ny fiafarany akory izy.
Ohatra, nifarana ny fitiavana, ary nanjary tsy mahazo aina ho an'ny lehibenao ny mitsofoka amin'ny filan'ny nofo taloha isan'andro. Inona no azony atao? Ny fomba mora indrindra dia ny mandrehitra afo sy manadino.
Ny firaisana tsikombakomba no fitsipika fototry ny tantaram-pitiavana eo am-piasana
Raha lasa lavitra ny fifandraisanao ka mifoha amin'ny fandriana iray miaraka amin'ny mpiara-miasa aminao ianao, dia tokony hiasa misaraka ianao. Misy fomba an-taonina maro hanatanterahana izany tsaratsara kokoa. Ohatra, mivoaka amin'ny fiara mpiara-miasa amina arabe roa alohan'ny toeram-piasana, sns.
Amin'ny hafanan'ny fahatezerana
Aza manaparitaka zavatra any am-piasana, na amin'ny toe-javatra inona, na dia mieritreritra aza ianao fa tsy misy mahita na mandre anao. Araka ny lalàn'ny fahaiza-mandanjalanja, amin'izao fotoana izao dia hisy olona iray handalo ny birao ary handre na hahita anao amin'ny voninahitry ny fahatezerana marina sy ny fahatezerana. Tsy sarotra ny maminavina fa manana fifandraisana matanjaka kokoa noho ny asa fotsiny ianao.
Tsy hanaporofo na inona na inona ianao!
Aza lavo amin'ny fihantsiana. Ny maminany sy mahalala dia zavatra roa samy hafa. Noho izany, raha mieritreritra zavatra ny mpiara-miasa aminao, saingy tsy manana porofom-pitiavana izy ireo, dia izao no olan'izy ireo. Azonao atao mihitsy aza ny tezitra ary miaro ampahibemaso ny voninahitrao.
Ahoana ny fomba hialana amin'ny fitiavana: torohevitra avy amin'ny psikology
Psychology lahy amin'ny fifandraisana amin'ny vehivavy
Ny tena fitiavana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy - misy ve izany?
Mariky ny fitiavana ve ny fialonana?
Ahoana no tsy handehanana adala sy manirery: ny torohevitra momba ny psikolojia
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,473.